भूकम्पका घाइतेको थप उपचार नि:शुल्क - Nepal News - Latest News from Nepal
भूकम्पका घाइतेको थप उपचार नि:शुल्क
काठमाडौं : सरकारले भूकम्पबाट घाइते भएका पीडितका लागि निरन्तर उपचार (फलोअप) खर्च पनि बेहोरिदिने भएको छ।
फलोअपमा आउने बिरामीबाट पनि सरकारी र निजी अस्पतालले धमाधम उपचार खर्च लिन थालेको गुनासो आएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उक्त निर्णय गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ।
यसअघि सरकारले भूकम्पका घाइतेको पहिलो चरणको उपचार नि:शुल्क गरेको थियो। तर निजी अस्पतालले घाइतेबाट थप उपचारका लागि पैसा असुल्न थालेपछि विवादमा परेको थियो।
अस्पतालले रकम लिन थालेपछि ‘फलोअप’ मा आउने बिरामी मर्कामा परेको महसुस गरी यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गुणराज लोहनीले बताए।
‘हामीले सरकारी, निजी र गैरसरकारी अस्पतालसँग छलफल गरेर फलोअपका लागि आउने बिरामीबाट कुनै शुल्क नलिने निर्णय गरेका छौं’, लोहनीले शनिबार अन्नपूर्णसँग भने, ‘यो निर्णयले घाइतेलाई ठूलो राहत दिनेछ।’
विनासकारी भूकम्पका कारण काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लामा करिब २२ हजार घाइते भएका छन्। गम्भीर घाइतेको उपत्यकाका शिक्षण, पाटन, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरलगायत ठूला सरकारी अस्पताल र नर्भिक, बी एन्ड बी, ग्रान्डी, अल्कालगायत निजी अस्पतालमा उपचार भएको छ।
‘मेजर अप्रेसन गरेका बिरामीले निरन्तर अस्पताल गएर जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ। भूकम्पले घरबारविहीन बनेका उनीहरूसँग पैसा तिर्ने क्षमता पनि छैन’, डा. लोहनीले भने, ‘त्यही भएर हामीले फलोअफ उपचार नि:शुल्क गर्ने निर्णय गरेका हौं।’
घाइतेले उपचार नि:शुल्क पाएनपाएको बारे अनुगमनसमेत गरिने लोहनीको भनाइ थियो। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म भूकम्पमा परी घाइते भएका दुई हजार ६ सय ५९ जनाको मेजर अप्रेसन गरिएको छ। घाइते भएका चार सय ३९ जना बिरामीलाई लामो समय उपचारको आवश्यकता रहेको लोहनीले बताए।
उनका अनुसार दुई सय ५३ जना बिरामीलाई दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाको आवश्यकता छ। यसका लागि विभिन्न मन्त्रालय र यस क्षेत्रमा काम गर्ने निकायसँग छलफल अगाडि बढाइएको लोहनीले बताए।
यसैबीच सरकारले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका अस्पतालमा सुत्केरीका लागि अस्थायी सेल्टर सञ्चालन गर्ने भएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार स्वास्थ्य महाशाखाकी निर्देशक डा. पुष्पा चौधरीले प्रभावित प्रत्येक जिल्लामा महिला, सुत्केरी र नवजात शिशुको अवस्था दयनीय रहेको गुनासो आउन थालेपछि सेल्टर सञ्चालन गर्न लागिएको बताइन्।
एक सातासम्म सुत्केरीलाई सेल्टरमा राखेर स्याहार गरिनेछ। ‘भूकम्पले धेरैका घर भत्किएकाले सुत्केरी र नवजात शिशुको सुरक्षाका लागि सेल्टर होम सञ्चालन गर्न लागिएको हो’, चौधरीले भनिन्, ‘सेल्टर होममा सुत्केरीका लागि आवश्यक पोषणयुक्त खानेकुरा, सामान्य उपचार र रिफरको व्यवस्था गर्नेछौं।’
पहिलो चरणमा ४० जनासम्म सुत्केरी बस्न मिल्ने सेल्टरका लागि अति प्रभावित जिल्लामा टेन्ट उपलब्ध गराइनेछ। सेल्टर सञ्चालनका लागि महाशाखालाई युनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन र यूएनएफपीएले टेन्ट दिएका छन्।
भूकम्पले बन्द विद्यालय आजबाट खुले